Chizvarwa chinotevera che AMD cheRenzen AM5 Desktop CPUs & maAPU zvinoenderana neiyo Zen 4 yekuvakisa kwekusimbisa inosimbiswa kuratidza yakasanganiswa RDNA 2 mifananidzo. Ruzivo urwu rwunosimbiswa mukati mekuburitsa magwaro eGigabyte na Chips uye Cheese (via Videocardz).
AMD Ryzen Desktop CPUs Kuti Uratidze Zen 4 CPU, RDNA 2 GPU & DDR5 Memory Rutsigiro
Izvo zvakaburitswa zvinyorwa zvinyorwa pasi pechinhu chinowirirana chinouya AM5 Desktop CPUs, kureva, iyo AMD Mhuri 19h. Iyi mhuri yevagadziri ichave yakavakirwa paZen 4 yekuvakisa kwekuvakisa uye sekureva kwese, mhuri ichave neyakaunganidzwa RDNA 2 girafu chip sezvakakurudzirwa mukudonha kwakapfuura.
Iwo magwaro anonyora pasi matatu AMD AM5 Desktop CPU mhuri ayo anofanirwa kuve akavakirwa pane iyo Zen 4 yakakosha yekuvakisa. Idzi mhuri dzichasanganisira maviri marudzi emachipisi, imwe ine iGPU inogoneswa uye imwe iine yakaremara iGPU. Izvi zvakanyorwa kune mamwe maPNP asingatakure Hybrid GFX rutsigiro (yakazvipira & yakasanganiswa).
AMD AM5 Platform Configurations Yeinotevera-Gen Ryzen Desktop CPUs & APUs:
Sezvineiwo, zvese izvi machipisi ane GPU yakasanganiswa anonzi APU mukati memagwaro uye tinoziva kuti AMD ichave neRembrandt APUs munguva pfupi iri kutevera iyo ichazunungusa iyo Zen 3 CPU & RDNA 2 GPU mapurani. Iyo AMD Raphael Zen 4 Desktop CPUs inogona zvakare kutorwa seAPUs sezvo ivo vachatakura iyo Zen 4 yakakosha yekuvakisa uye RDNA 2 GPU asi ichave iine mashoma mamodheru uko iGPU inogoneswa ichienzaniswa neiyo Rembrandt APU mutsara.
Akaburitsa magigabyte magwaro anonyora pasi akaomeswa magiraidhi rutsigiro rwe AMD's AM5 Ryzen Desktop CPUs & APUs. (Mufananidzo Source: Chips & Cheese)
Iyo AM5 mutengi desktop desktop inoratidzirawo 4x yekuwedzera PCIe Gen 4 nzira dzinogona kushandiswa kubatanidza chero M.2 slot, x4 PCIe slot, kana kuzvisanganisa zvakananga kune discrete USB4 controller, sekuzivisa kwenzvimbo. Mune kumwe kumisikidza, iyo x4 PCIe Gen 4 nzira dzinenge dzichimisikidza USB4 hub iyo inopa maviri mabhanhire emabhanan'ana ane DP 2.0 rutsigiro.
Kana iri nguva yekutarisira aya AM5 CPUs & APUs, iyo Raphael Zen 4 Ryzen machipisi ichave yekutanga kurova iyo nyowani chikuva gore rinouya ichiri kukakavadzana kuti Rembrandt APUs ichauya kune iyo AM4 chikuva kana yakanangana ne AM5 chikuva kunyange zvinonzwisisika kuva navo papuratifomu nyowani kana vakagadzirirwa kushandisa yavo yakazara ficha yakatarwa. Isu tinogona zvakare kuona DP2.0 papuratifomu yeplatform iyo yaizoratidzwa panguva yeCES 2022.
AMD Zen CPU / APU Mugwagwa:
Node Node 14nm 12nm 7nm 7nm 6nm? 5nm 3nm?
Server EPYC Naples (Chizvarwa Chekutanga) N / A EPYC Roma (Chizvarwa Chechipiri) EPYC Milan (Chizvarwa Chechitatu) N / A EPYC Genoa (4th chizvarwa)
EPYC Bergamo (Gumi rechishanu?) EPYC Turin (6th Gen)
Yakakwira-End Desktop Ryzen Threadripper 1000 (White Haven) Ryzen Threadripper 2000 (Coflax) Ryzen Threadripper 3000 (Nhare Peak) Ryzen Threadripper 5000 (Chagal) N / A Ryzen Threadripper 6000 (TBA) TBA
Mainstream Desktop CPU Ryzen 1000 (Summit Ridge) Ryzen 2000 (Pinnacle Ridge) Ryzen 3000 (Matisse) Ryzen 5000 (Vermeer) Ryzen 6000 (Warhol / Akadzima) Ryzen 7000 (Raphael) Ryzen 8000 (Granite Ridge)
Yakaderera-Simba Nhare N / A N / A Ryzen 5000 (Van Gogh)
The post AMD Ryzen AM5 Desktop CPUs Ine Zen 4 Architecture Yakasimbiswa Kuisa Yakabatanidzwa RDNA 2 Graphics yakatanga kutanga Wccftech.
AMD Inozivisa Ryzen Threadripper Pro 5000 WX-Series: Zen 3 YeOEM Workstations